Rypple: feedback, coaching ary fanekena | Martech Zone
Rypple: valiny, fampiofanana ary fanekena
Talata, Jolay 10, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Nifindra tetezamita izahay workstreaming any Yammer ny herinandro vitsivitsy lasa izay ary tena mandeha tsara. Na dia androany aza dia ao amin'ny birao i Marty, niasa alina tao an-trano i Stephen, any amin'ny Ball State aho, any India i Nikhil ary miasa any an-trano i Jenn. Mba hifampandrenesana hatrany, dia manavao an'i Yammer izahay mba hifanaraka hatrany amin'ny daty misy antsika, ny zavatra ataontsika ary ny zavatra ilainay fanampiana. Izy io dia fitaovana fifandraisana ara-tsosialy lehibe ao anatin'ny fikambananay.
Ahoana raha azonao atao ny mandray ireo resaka ireo ary manampy ny fametrahana tanjona, ny fampiofanana, ny fanekena ary ny valiny? Izany no antenain'ny Rypple ho fampisehoana sosialy sehatra. Izay rehetra niainan'ny mpampiasa dia mitovy amin'ny Facebook, ka mora ampiasaina ihany koa. Mampatsiahy ahy betsaka ny Rypple Yammer, fa misy fiasa fanampiny ho an'ny fananganana ekipa sy ny fanekena.
Ny toeram-piasana anio dia mitaky fomba vaovao amin'ny fitantanana fahombiazana. Rypple dia sehatra fitantanana fampisehoana asa sosialy miorina amin'ny tranonkala izay manampy ny orinasa hanatsara ny fahombiazan'ny tanjona ara-tsosialy, ny fanehoan-kevitra mitohy ary ny fanekena misy dikany.
Ahoana raha azonao atao ny mampifandray ny fikirakiranao, ny fitazonana tanjona ary ny hevitrao mivantana amin'ny CRM anao? Azonao atao ny hatramin'ny Salesforce nividy Rypple tamin'ny volana feb. Rypple dia mifangaro tanteraka amin'ny Salesforce (sy Chatter). Vonona amin'ny finday koa izy io.
Famaritana ny ROI Facebook sy Twitter
Maninona ireo mpivarotra miditra no mampiasa Infografika